Kooxda Barcelona oo caddeysay qorshaheeda Aubameyang & Arsenal oo diyaar u ah iibintiisa – Gool FM
(London) 16 Mar 2020. Hillinka Express ayaa ku warramaya in Arsenal ay diyaar u tahay iibinta weeraryahankooda Pierre-Emerick Aubameyang haddii ay ku guuldarreystaan inay aqbalaan heshiiska uu dalbanayo, hase ahaatee naadiga Barcelona ayaa doonayso inay iska soo gabagabeyso guud ahaan xiisahii ay u qabtay.
Blaugrana ayaa ayaa ka fikiraysa inay xoojiso weerarkeeda, waxaana ay baadi goob ugu jireen kabtanka kooxda Arsenal, kaasoo xilli ciyaareedkan dhaliyay 20 gool kaddib 32 kulan oo uu ciyaaray.
Aubameyang ayaa Gunners kula jira qandaraas ku eg dhammaadka xilli ciyaareedka soo socda, waxaana si xoog leh loola xiriiriyay kooxaha Barcelona iyo Inter Milan.
Inkastoo kooxda ay sameynaysay xoogaa horumar wanaagsan tan iyo markii shaqada loo magacaabay tababaraha hadda hoggaamiya ee Mikel Arteta, haddana kooxda uma muuqato mid u soo bixi karta tartanka UEFA Champions League-ga, taasoo keeneysa inay xiddiga reer Gabon iyo kooxdiisa ay dhanka mushaaraadka ka dagaallamaan.
Aubameyang ayaa doonaya in mushaaraadkiisa oo hadda ah 300,000 oo gini toddobaadkii lagu kordhiyo 30%, taasoo dhalisay in wada hadalladii heshiiskiisa lagu kordhin lahaa ay joogsadaan, Arsenal-na ay ka fikirto iibintiisa.
Hase ahaatee, Barca ayaa u sheegtay Aubameyang inuusan isaga u ahayn dooqa koowaad, maadaama ay diiwaankooda meesha ugu sarreysa ay ku qoran yihiin magacyada laacibka Inter Milan ee Lautaro Martinez iyo xiddigga kooxda Paris Saint-Germain ee Neymar Jr oo ay doonayaan inay kooxdooda ku soo celiyaan.
Si kastaba ha ahaatee, Aubameyang waxa uu xiiso kale ka helayaa kooxda Inter Milan oo diyaar u ah inay qarash ku bixiyaan soo qaadashadiisa, haddii uu farahooda ka baxo weeraryahanka reer Argentina ee Martinez.